Nagu saabsan | Huai'an Ruisheng International Trade Co., Ltd.
Huai'an RuiSheng Garment Co., Ltd. oo la aasaasay sanadkii 2010, waa shirkad ganacsi oo ajnabi ah soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga ajaanibta ee gobolka Huai'an Jiangsu, Shiinaha, waxay daboolaysaa aag dhan 3500sqm, aqoon isweydaarsiyo la isku habeeyay oo ah 1100sqm, waxaana suurto gal ah inay qabato 1500 oo qof inay shaqeeyaan, taas oo ka mid ah dharka baaxada weyn. shirkadaha Huai'an. Bishii Juun 2018, shirkaddu waxay si guul leh u dhaaftay shahaadada caalamiga ah ee BSCI. Waxaan leenahay 2 warshadood oo kuyaala Huai'an, mid waxaa la dhahaa RuZhen oo ku takhasusay T-Shit, Polo, Pants, Shorts, Sportwear, Jacket, Coat, mid kalena waxaa lagu magacaabaa Haolv xirfadlayaal gogosha gogosha, gogosha, barkimada, furaashka, qurxinta.
Wada-hawlgalayaashayadu waxay ka shaqeeyaan 400 oo magac oo ku yaal 30 waddan oo adduunka ah inay ku guuleystaan ​​aaminaadda dhammaan macaamiisha oo leh tayo sare, waxayna macaamiishooda ka heleen ammaan joogto ah tan iyo markii la aasaasay. Shirkadda waxay haysataa fikradda maamul ee ah “Tayada waxay Tahay Awooda, Tafaasiisha Gaarista Guusha”, waxayna isku dayeysaa inay wax wanaagsan ka qabato dhinac kasta, goob kasta oo ka mid ah habka wax soo saarka ilaa kormeerka ugu dambeeya, xirxiran iyo rarka. Waxaan ku adkeysaneynaa mabda'a horumarinta "Tayo sare, karti, hufnaan iyo iyo wadashaqeyn hoos u socota" si aan kuu siino adeeg aad u fiican oo ka shaqeynta ah! Waxaan si kal iyo laab ah kuugu soo dhawaynaynaa inaad soo booqato shirkadeena ama nala soo xiriir si aan u wada shaqeyno!
Khadka ugu weyn ee wax soo saarka dharka ayaa leh in ka badan 200 nooc oo ah qalabka tolidda ee horumarsan ee waddanka, dhammaan noocyada kala duwan ee qalabkuna way dhammaystiran yihiin; waxay leedahay 180 shaqaale ah, oo ay ku jiraan 100 ka mid ah dadka ku shaqeeya harqaanka, 20 shaqaalaha dawaarka, 40 shaqaalaha baakadaha kormeerka iyo 20 kale oo ah shaqaalaha farsamada iyo maamulka.
sanadkii 2011, khadka soosaarka dharka ee shirkadda ayaa u guuray beerta warshadaha. Aagga dhirta cusub ee la dhisay waxay leedahay deegaan qurux badan, wax soo saar dhameystiran, nolol, badbaado iyo tas-hiilaadka dabka. Shirkaddu waxay u tixgelisaa shaqaalaha inay yihiin hantida ugu weyn ee shirkadda, waxayna leedahay jawi dhaqameed wanaagsan iyo dhaqanka shirkadaha.
Uisheng International Trade Co., Ltd.Originated 1999, shirkad yar oo leh in kabadan dhowr iyo toban dad ah oo ku takhasusay dharka banaanka ee dharka. Ka dib 20 sano oo horumar ah ， Hada waxay leedahay awood ay si madax banaan u naqshadeyso, horumariso, u soo saarto dharka iyo dharka. Hada waxaa jira warshad dharka iyo warshad soo saarta dharka oo ku takhasusay tolida iyo tolida ， Waxay leedahay tiknoolajiyad madax banaan waaxda soo iibinta qalabka tayada. Iibka sanadlaha ah 5 milyan oo doolarka Mareykanka ah.
Alaabada gudaha: T-shirts, shaatooyin Polo, dharka isboortiga ragga iyo dumarka ee dharka jilicsan, dharka ragga iyo dumarka, dharka jaakadaha hoostooda, jaakadaha, dharka caadiga ah iyo ku dhawaad ​​100 nooc oo kale.